desk	१५ कार्तिक २०७७, शनिबार
त्यो उज्यालो रात, पुर्णिामा को पुर्ण चन्द्रमा , खुल्ला गगन, हल्का कहि कतै देखिने त्यो चादको चादनि(रोशनी ) ले रापिलो भएको बादल अनि त्यस भन्दा पनि माथि सबैलाई नियाल्दै चादमा थप उर्जा दिईरहेका हजारौं अनि करोडौं तारा सितारा हरु साच्चिकै घरको बाहिर आगनमा शितलता तापिरहेको म कुनै स्वर्गमा भन्दा कम अनुभूति थिएन्।
दिशा र गन्तव्य बदल्दै एता र उता उडिरहेका ती बादलका दृश्य साचै म आफ्नो जीवन सगैं तुलना गरे। म जस्तै रहेछ त्यो बादल पनि पूरा खुल्ला आकाश हुदा पनि कुनै निश्चित गन्तव्य नै नभएको कुन बेला कहाँ पुगेर कुन पहाडमा ठोकिँदै सकिन्छ अनि हावामा विलय हुँदै वर्षा सगैं खोलामा मिसिएर कहाँ पुग्दछ पत्तो नै नहुने।
बाहिरी आगनमा शितलता ताप्दै निरन्तर ती बादलका झोकाहरु सगैं चाद को उज्यालो त छदै छ , कुनै बेला बादलको लहर सगैं छेकिने अनि कुनै बेला लाखौं को सङ्ख्या मा देखिने ती ताराहरु निरन्तर हेरिरहे ।
भित्र भित्रै एउटा प्रश्न गुन्जिरहेको थियो, साच्चै ती करोडौं को सङ्ख्यामा हुदाहुदै कसरी लाखौं बर्षसम्म मिलेर बसेका होलान्। हामी चेतनशील प्राणी मा त्यो किन सम्भव नभएको ? बस यस्तै-यस्तै कुराहरूले एकोहोरो टोलाएर त्यहि स्वर्गमय रातसंगै लाखौं तारा अनि पुर्ण चन्द्रमा संगै हराईरहेको म, त्यतिकै मा त्यही माथिको एकछेऊ बाट ज्वलन्त प्रकाश छर्दै एउटा तारा खस्दै गरेको दृश्यले मलाई ब्युझायो। भनिन्छ खस्दै गरेको तारा देख्दा मनले मागेको कुरा पूरा हुन्छ रे।
म पनि त्यहि सर्वसाधारण नै त परे अन्धविश्वास भनम या आस्था आँखा बन्द मन शान्त पार्दै केही कुराको पुर्तिका निम्ति माग गर्दै थिए, कसैले प्रश्न गरेझैं अनुभुती भयो। लाग्दै थियो त्यो टुटेको ताराले केही प्रश्न गर्दै थियो-” मानव तिमी के माग्दैछौं? के तिमीलाई लाग्दैछ कि म तिम्रो ईच्छानुसार गर्न सक्छु? के तिमीलाई लाग्छ एउटा टुटेको चिज जो निर्जिव छ, त्यसले तिम्रो मनको ईच्छा पूरा गर्छ? जस्को आफ्नै अस्तित्व समाप्त हुँदै छ, तेस्ले तिम्रो अस्तित्व बचाउन सक्छ र? कर्म र कृयामा के भिन्नता छ? तिम्ले सदैव माग्ने त्यो सुख को लागि तिम्ले दुःख कति गरेका छौँ ? माग्दैछौं त ठिक छ तर सधैं तिम्रा लागि मात्रै किन? फल प्राप्तिका लागि कर्म भन्दा ठूलो म होर? लाखौं बर्ष सम्म अडिग भएर बसेको म त हरायर गए अमर हुन सकेन, तिम्रो ईच्छानुसार तिम्रो मार अनुसार कसैलाई कसरी अमर राख्न सक्छु? आफै त असफल भएर अस्तित्व मेटिदै छ तिम्रो हरेक सपना कसरी सफल पार्न सक्छु? आफ्ना लागि सबै माग्ने तिमीले तिम्रा ती भगवान रुपि बा-आमा का लागि के-कति माग्यो? तिम्रा गुरुका लागि के माग्यौ, के गर्यौं? तिनलाई कुन दर्जामा राख्दछौं ? तिम्रो लागि सदैव मरिहत्ते गर्ने तिम्रा मित्रगण को लागि कति त्याग गरेका छौ? ढुगांरुपि भगवान लाई मान्ने तिमी तिम्रा वास्तविक भगवान माथिको आस्था र बिस्वास खै? आफ्नो व्यबहार र चरित्रले कस्तो प्रभाव छोडेका छौं? म बाट यति आशावादी तिमी अरुको लागि के-कति गरेका छौं ? भलो र कुभलो के-कति गर्यौं र गरेका छौं? म बाट तिम्ले सजिलोसँग मागेउ तर त्यसको लागि तिम्ले कति परिश्रम गरेका छौं? त्यसको लागि तिम्रो त्याग कति? स्वार्थ कति? कसको भलो? म जस्तै टुटेका यस अघिका मेरा सहकर्मी संग के-कति मागेउ? यो तिम्रो स्वार्थ कि आस्था ?? ठूलो स्वरमा चिच्चाएर जवाफ मागिरहेको थियो।
त्यहि आवाज संगै होशमा आएको म,आखामा छेउ बाट आँसु रसाईरहेको थियो। म शब्दहिन र अर्थहीन भए । म संग कुनै प्रश्न को उत्तर थिएन । साच्चै उस्ले गरेका हरेक प्रश्नको उत्तर थिएन म संग । उसका हरेक प्रश्नमा वास्तविकता थियो। आज उ मात्रै होइन म पनि भित्र बाट टुटिसकेको थिए। सायदै उसको बिदाईमा मेरा आँखा रसाईरहेका थिए। टुटिरहेको तारा देख्दा मुश्कुराउदै मनको कुरा माग्ने मानिसको भिडमा सायदै म भिन्न हुन पुगेछु। वास्तविकता पनि यहीँ हो, कसैको जिबनको अस्तित्व मेटिदै गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न म उ बाट के नै माग्न सक्छु र? त्यो टुटेको तारा सङ्ग को प्रश्न-उत्तर सङ्गै म पनि टुटेको पत्तै भएन ।।।